Qashinka cuntada waxaa laga hortegi doonaa ololaha badbaadinta cuntada RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQashinka cuntada waxaa laga hortegi doonaa ololaha cuntada ee ilaaliya
20 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Headline, TURKEY
Qashinka cuntada waxaa looga hortagi doonaa ololaha lagu xafidayo cuntada
Turkiga, waa mashruuc ballaaran oo lagula dagaallamayo khasaaraha cunnada iyo qashinka. Iyada oo taageero laga helayo Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay (FAO), mashruuca “Ilaali Cuntada, Ilaali Miiskaaga” waa Wasiirka Beeraha iyo Dhirta. Waxaa lagu soo bandhigay shir saxaafadeed dijital ah oo uu soo abaabulay Bekir Pakdemirli.
Khudbaddiisii ​​kulanka, Wasiirka Pakdemirli wuxuu ku nuuxnuuxsaday in kasta oo cuntada lagu tuuro hal dhinac oo adduunka ah, dhinaca kalena dadku aysan ogeyn inay sii noolaan doonaan maalinta ku xigta gaajo darteed, “Maanta waxaan bilaabeynaa mashruuc muddo dheer soconaya oo aan higsaneyno inaan sare ugu qaadno wacyiga bulshada ee la-dagaallanka cunnada iyo qashinka. Waxaan hiigsaneynaa inaan noqono tusaale ku dayasho leh aduunka oo dhan iyadoo la adeegsanaayo Ilaalinta Cuntadaada, Mashruuca Gıdanı Koru ”.
Waxaan ka shaqeynay CAMPAIGN CILMI LAMBARKA SHAQAALAHA EE 1,5 SANO
Iyadoo la cadeynayo in howsha loo waday ololaha ilaa 1,5 sano, Pakdemirli wuxuu yiri, “Intii lagu gudajiray ololaheena, Ilaali cuntadaada, Ilaali miiskaaga, waxaan la imaanay tiro badan oo daneeya qeybta qeybta Ololaheena. Waxaan qorsheyneynay inaan idinla wadaagno bilowga ololahaan fool ka fool inaad fool ka fool kula yeeshaan bisha Maarso. Si kastaba ha noqotee, tani uma suurtagelin sababtoo ah faafitaanka Covid-19, oo saameyn ku yeeshay waddankeenna iyo adduunka oo dhan. ”
MUHIIMKA CUNTADA CUNTADA CUNTADA CUNTADA AMA AMMAANKA CUNTADA AAD UGU BILAABATAY
Isagoo carrabka ku adkeeyay muhiimadda silsiladda cunnada iyo sugnaanta cunnada adduunka oo dhan in si wanaagsan loo fahmay muddadii uu socday cudurka faafa, Wasiirka Pakdemirli wuxuu yidhi, “Wadamo badan, waxaan ku aragnay safafyo waaweyn iyo sheltar madhan oo ay dadku abuureen inay cunto gaarsiiyaan. Turkiga, in kasta oo howshan lagu hayo silsiladda sahayda cunnada, maanaan la kulmin dhibaato maalmahan sidii aan mar kale u ogaan lahayn ahmiyadda cuntada, waxaan go'aansannay inaan dib u dhigno ololaheenna gaarka ah "qiimeynta la helay.
SADDEXAAD Cuntada la soo saaray ayaa WUXUU KA MARNA AMA SADDEXAAD SANAD
Tirada dadka dunida ku nool sanadka 2050, sida ku xusan qiyaasta, 10 bilyan, halka wasiirrada Pakdemirli ee shacabka Turkiga ay gaari doonaan 100 milyan oo muujinaya taas oo muujineysa “kororka 2050 boqolkiiba baahida cunnada adduunka ayaa la rajeynayaa sannadka 60. Iyada oo 9 ka mid ah 1-ka qof ee dunida ay wajahayaan gaajo, in kabadan 670 milyan oo qaangaar ah iyo 140 milyan oo dhalinyaro ah ayaa haysta dhibaatooyin buurnimo. "Saddex meelood meel cunnada la soo saaray, ee ah 1,3 bilyan tan, waa la lumaa ama lagu khasaaraa sannad walba."
WAA IN AAN HADAAN 'AAD AKHRISO AKHRISKA-AKHRISKA'
Isagoo hoosta ka xariiqay in silsiladda sahayda cunnadu ay dabooleyso dhammaan howlaha ka socda garoonka illaa miiska, Pakdemirli wuxuu yiri "Baadhitaankii ugu dambeeyay ee hay'adda FAO, 14% cunnooyinka ka soo baxa beerta ilaa tafaariiqda ayaa lumay. Dhanka kale, wasakhda cunnada waxay ku soo baxdaa marxaladda iibka, sida tafaariiqda iyo isticmaalka. Qashinka cuntada waa 1/3 xilliga iibinta iyo isticmaalka. Sidoo kale, waxaan ku dhejinayaa muhiimadda weyn xagga akhris-qorista cuntada. 65% bulshada ma yaqaaniin farqiga udhaxeeya taariikhda dhicitaanka cunnada iyo taariikhda isticmaalka la taliyo. Sidaa darteed, shakhsiyaadka miyir qaba, oo leh mabda'a bulshada miyirka leh, waa inay marka hore joojiyaan qashinka cuntada ee guryaheena ah iyagoo beddelaya dhaqankeena shaqsiyeed Midkeen kastaaba waa inuu noqdaa mid fiican oo 'wax akhrinta cuntada'.
"Gudaha dalkeenna, 18,8 milyan oo tan oo ah cunnada cunnada ah ayaa sanad walba la bixiyaa"
Isagoo tixraacaya luminta iyo luminta cunnada ee dalkeenna, Pakdemirli ”Waxaan aragnaa in 4,9 milyan oo rooti ah la lunto maalin walba. 50% khudaarta iyo miraha la soo saaray way lumeen. Qeybta adeegga, 4,2 tan oo cunto ah iyo 2.000 litir oo cabitaan ah ayaa la lumiyaa sanadkii. Si kale haddii loo dhigo, 18,8 milyan tan oo cunno ah ayaa sannad kasta ku khasaara dalkeenna. Tani waxay u dhigantaa xaddiga qashinka ay qaadanayaan qiyaastii 625 kun oo gawaarida qashinka ah. Sidaa darteed, waxaan u baahan nahay inaan soo saarno xalal wax ku ool ah dhammaan silsiladda cuntada si loo yareeyo xaddiga cuntada qashinka ah. ”
HIMILOOYINKA UGU DAMBEEYA WAA IN AY KA HESHI LIHIIN NABADA IYO CUNTADA Cuntada
ka hortagga khasaaraha cunnada iyo qashinka ee Turkiga markii ugu horeysay, Wasiirka wuxuu sheegay inay Pakdemirli u diyaarinayaan Dukumiinti Istaraatiijiyadeed oo Qaranka ah iyo Qorshe Tallaabo oo lagu dhimayo iyo maareynta "ayaa been abuur ku saleeyay istiraatiijiyaddeena Qaranka sida uu sheegayo Cunnada Hilirarchy. Himiladeena koowaad waa inaan ka hortagno khasaaraha iyo qashinka cuntada. Himiladeenna labaad waa inaanu keydino oo dib-u-qaybinno cuntada haddii ay suurtagal tahay. Hadafkayaga saddexaad waa inaan u isticmaalno sida xoolaha xayawaanka lagu quudiyo haddii isticmaalka aadanaha aysan suuragal ahayn. Ugu dambeyntiina, in dib loo warshadeeyo cuntada wasakhda ah. ”
Ku dhawaad ​​100 WAXQABAD AH OO KU SAABSAN
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in ku dhawaad ​​100 ficil iyo hay'ado iyo ururo mas'uul ka ah fulinta ficil kasta ay ka go'an tahay in la gaaro yoolalkaas, Pakdemirli ayaa yiri, “Wasaaradda ahaan, waxaan kugu qaadeynaa talaabada ugu horeysa ee aan kor ugu qaadno wacyiga ku aadan ka hortaga khasaaraha cunada iyo qashinka. Ogaantu waa qodobka ugu muhiimsan ee looga hortago cunno luminta iyo qashinka. Halkan, waxaan u qorsheysanay olole ku saleysan ujeeddooyinkan si codkayaga looga dhigo mid dheeri ah. Waxaan aaminsanahay inaan ka ciyaari karno door hogaamineed xalka dhibaatadan caalamiga ah, hadii aan ka saarno dukumintigan, oo asaas u ah ololahayaga, inaan ka noqonoqoqoto dukumenti la aqrin karo, waxaanna ku cadeyn karnaa ficilada ku jira kor u qaadida waxaanna gaarsiin karnaa dhamaan saamilayda kujira silsilada cuntada. Markaan isu nimaadno, waxaan tusi karnaa sida aan u xoog badnaan karno.
MADAXWEYNAHA DIIWAANKA BIYAHA EE BIYAHA "CANO"
Ku noolaanshaha khasaaraha iyo wacyiga qashinka ee ololaha I www.gidanikoru.co Wuxuu kaloo cadeeyay inuu yeelan doono degel cinwaan leh. Bekir Pakdemirli, Dhawrista Cuntada, wuxuu ku soo bandhigay Maso, masoorkii ololaha Claim Your Ololaha Miiskaaga, shir jaraaid.
Isagoo carabka ku adkeeyay in Cano uu nala joogi doono ololahan oo dhan, ayuu Wasiir Pakdemirli yidhi, “Meelkasta waad arki kartaan isaga. Wuxuu dhihi doonaa wuxuu ka dalban doonaa makhaayadda inta aad ubaahantahay, mararka qaar waxaan ku aragnaa suuqyada, wuxuu ku weydiin doonaa hadii aad qorsheynaysid dukaamadiisa gurigiisa, mararka qaar wuxuu na xasuusin doonaa ololaheena qolka cuntada ee goobta aan ka shaqeyno. ”
Isagoo caddeeyay inay sidoo kale diyaariyeen hagyo codsi oo wanaagsan oo ku saabsan ganacsiyada cuntada, Pakdemirli wuxuu yidhi, "Ilaa inta deegaanku oggol yahay, waxaan xoojin doonnaa awooddeenna aqoon isweydaarsiga oo aan baran doonnaa inaan ku khasaarin Kheyraadkeena. Waxaan sidoo kale ololeheena ku haysan doonnaa jikada cuntada lagu keydiyo. Ololaheenna, waxaan ugu talogalnay inaan sare u qaadno wacyiga oo aan dhiirrigelino ka-qeybgalka iyada oo loo marayo mareegteenna si hufan loo maareeyay iyo xisaabaadka warbaahinta bulshada. ”
SANAD SANAD SANAD KOOBAN 2 360 kun oo qoys ah ayaa la muujiyaa haddii aanaan soo qaadin 1 cunno cunto ah.
Isaga oo leh milkiilaha dhabta ah ee ololuhu waa qayb kasta iyo shakhsiyaadka bulshada, Pakdemirli wuxuu yidhi, “Sababtoo ah haddii aan joojino dirista Cuntada iyo Qashinka dalkeena ilaa xad, taasi waa, qiyaastii 2% cunnada, waxay la micno tahay 10 bilyan oo lira, taasi waa, tirada ugu yar ee nolosha 360 kun qoys. Haddii aan maarayn karno sicirkan 1%, waxaa loola jeedaa 5 bilyan oo liras. Tani waxay mar kale u dhigantaa tirada ugu yar ee ah 25 qoys muddo 900 sano ah. Marka la soo koobo, cabirka dhaqaale ee khasaarahan sidoo kale waa mid aad u sarreeya. Xaaladda guud, waxaan fileynaa dhammaan daneeyayaasha inay taageeraan howlaha wacyigelinta ah inta lagu guda jiro ololaha. ”
Saldhiga Bisha Cas
Wadooyinka ma aysan ilaalinin degmada
Jadwalka Jadwalka Joogtada ee OSB / Törekent Sidee loo abaabulaa?
Bilal Ekşi, maamulaha guud ee shirkadda THY, oo duullimaadyadeedii loo joojiyey sababo la xiriira tallaabooyinka coronavirus isla markaana bilaabi doona inay mar kale shaqeeyaan June, ayaa sheegay in aan go'aan la gaarin oo ah in kuraasidaas ay faaruqi doonaan diyaaradaha. [More ...]
Anadolujetten Erciyeste Ski Ku raaxeysta Ololaha Isdhaafsiga Gaarka ah
Ololaha Saxiixa ee Zonguldak's Filyos Town D
Ololaha guga Citroende
Ololaha tikidhada 5 wuxuu u fidiyey Eskisehir Konya YHT